Dawladda Ruushka Oo Itoobiya Ka Caawinaya Tamarta Nukliyeerka | Haqabtire News
Dawladda Ruushka Oo Itoobiya Ka Caawinaya Tamarta Nukliyeerka
Addis Ababa:-(HTN) Dawladaha Itoobiya iyo Ruushka ayaa Jimcihii isku raacay in ay iskaashi ka yeeshaan tamarta Nukliyeerka(Nuclear energy) kadib kulamo uu madaxda Itoobiya la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Mr Sergey Lavrov oo bookhasho ku yimid Addis Ababa.
“Ruushku wuxuu Itoobiya ka caawinayaan hammigeeda tamarta Nukliyeerka, kaas oo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo isku xidhnaanta labada dal ee dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka,” Sidaas ayuu yidhi Sergey Lavrov oo la hadlayay warbaahinta gudaha iyo tan caalamiga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushku waxa uu sheegay in ay hadda socdaan wada hadallada arrintan taas oo ku saabsan in la sameeyo xarun cilmi baadhiseed oo Nuclear-ka ah taas ooh ore Ruushku u nashqadeeyay. Waxa uu sheegay in arrintan degdeg loo hirgelin doono iyada oo aanay jirin ahmiyad dib u dhac keenaysa.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Workneh Gebeyehu waxa uu dhankiisa sheegay in ay Itoobiya qorshaheeda ka mid tahay tallaabadan “ Waanu isku raacnay, waxaanuna bilaabayna shaqada tamarta Nukliyeerka oo ujeedo nabadeed aanu u samaysanayno,” Sidaas ayuu sheegay wasiir Workneh Gebeyehu